JZü - Yoma Bank
အတိုးနှုန်း ၃%(p.a) အပြင် အပ်ငွေ ၃ ဆ ရရှိနိုင်မယ့် အခွင့်အရေး
2020 February 2020 January 2019 December 2019 November 2019 October 2019 September 2019 August 2019 July 2019 Jun 2019 May 2019 April 2019 March 2019 February 2019 January 2018 December 2018 November 2018 October 2018 September 2018 August 2018 July
0003-XXXX-XXX-0295 U Aye Ko 224,194 mmk
0005-XXXX-XXX-0449 Daw Thin Sandi Aye 413,965 mmk
0010-XXXX-XXX-0070 U Zaw Hein 2,021,241 mmk
0046-XXXX-XXX-0260 U Myo Min Min 205,189 mmk
0005-XXXX-XXX-0725 Khaung Zay 2,059,987 mmk
0054-XXXX-XXX-0301 Daw Nan Hnin Thidar 224,336 mmk
0015-XXXX-XXX-0626 Daw Maw Kyi 1,022,715 mmk
0059-XXXX-XXX-0143 U Myat Thu 13,828,784 mmk
0016-XXXX-XXX-2480 Thin Thin Kyu 101,281 mmk
0062-XXXX-XXX-0320 Daw Mya Wai 131,471 mmk
0059-XXXX-XXX-0427 Kyi Win 1,006,507 mmk
0011-XXXX-XXX-2589 Thuzar Nwe 100,940 mmk
0047-XXXX-XXX-0953 Daw May Zin Moe 301,952 mmk
0007-XXXX-XXX-0509 Daw Phyu Phyu Win 202,499 mmk
0002-XXXX-XXX-0899 Mg Chit Htoo 204,617 mmk
0040-XXXX-XXX-1956 U Nay Lin Aye 1,078,816 mmk
0040-XXXX-XXX-0039 U Zaw Wunna 947,893 mmk
0020-XXXX-XXX-0653 U Kyaw Aung Naing 611,587 mmk
0050-XXXX-XXX-1046 Win Pa Pa 205,002 mmk
0027-XXXX-XXX-0503 Daw Khine Su Su Htay 209,758 mmk
0016-XXXX-XXX-3576 Nant Phyu Phyu Aye 100,000 mmk
0032-XXXX-XXX-0413 Daw Soe Soe Khaing 1,720,153 mmk
0008-XXXX-XXX-1132 Ma Khin Sandar Tun 101,872 mmk
0022-XXXX-XXX-0465 Daw Phyu Pyar Ei 12,600,811 mmk
0040-XXXX-XXX-0091 Cho Cho Myint 1,589,160 mmk
0023-XXXX-XXX-0783 Mo Mo Zaw 1,658,658 mmk
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပထမဆုံး JZü အကောင့်ကို ရိုးမဘဏ်က မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါပြီ။ လွယ်ကူအဆင်ပြေ၍ Online နှင့် Mobile Banking ကို အသုံးပြုနိုင်ပြီး အတိုးနှုန်း ၃%(p.a) အပြင် လစဉ်အပ်ငွေရဲ့ ၃ ဆ ကို ရရှိနိုင်မယ့် အခွင့်အရေးဖြစ်ပါတယ်။ JZü ဆိုတဲ့အတိုင်း သင့်အတွက် အခွင့်အလမ်းကောင်းတွေ ရှိနေတာကြောင့် JZü ကို သင်က ကျေးဇူးတင်နေမိမှာပါ။
လူကြီးမင်းနှင့် အနီးစပ်ဆုံး ရိုးမဘဏ် ဘဏ်ခွဲမှာ ယခုပဲ အကောင့်ဖွင့်လှစ်ပြီး လွယ်ကူအဆင်ပြေသော SMART account နှင့်အတူ SMART MPU Debit Card ကို ရယူနိုင်ပါတယ်။
ရိုးမဘဏ်ရဲ့ Mobile Banking Application မှတဆင့် သင့်ရဲ့ငွေကြေးစီမံခန့်ခွဲမှုများအပြင် SMART နှင့် JZü account များကို အချိန်မရွေး ၂၄ နာရီ အလွယ်တကူ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
အပ်ငွေအပေါ်မှာ အတိုးနှုန်း ၃%(p.a) ကို နေ့စဉ် အတိုး တွက်ချက်ပြီး လစဉ်အတိုးငွေ အကျိုးခံစားခွင့် ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အပ်ငွေအပေါ်မှာ အတိုးနှုန်း ၃% ကို နေ့စဉ် အတိုး တွက်ချက်ပြီး လစဉ်အတိုးငွေ အကျိုးခံစားခွင့် ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
JZü account ဆိုတာ ဘာလဲ
JZü account ဆိုတာက တစ်နှစ်ကို အတိုး ၃%(p.a) ပေးအပ်မှာ ဖြစ်ပြီး အတိုးကို နေ့စဉ်တွက်ချက်ကာ လစဉ်ပေးအပ်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ပြင် account ထဲမှာ အနည်းဆုံးအပ်ငွေ ၁ သိန်းရှိရင် အပ်ငွေ ၂ ဆ ရရှိနိုင်မယ့်အခွင့်အရေးလည်း ရှိပါတယ်။
JZü ဆိုတာ ဘာကိုဆိုလိုတာပါလဲ။
JZü ဆိုတာကတော့ မြန်မာလို ကျေးဇူး လို့ အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ JZü ကို ရေးသားတဲ့အခါ J အကြီး၊ Z အကြီး၊ u အသေးနဲ့ ရေးရပါမယ်။ မြန်မာအသံထွက်နဲ့ ကိုက်ညီစေဖို့ u ကို ü နဲ့ အသုံးပြုထားပါတယ်။ လွယ်ကူအဆင်ပြေ၍ Online နှင့် Mobile Banking ကို အသုံးပြုနိုင်ပြီး အတိုးနှုန်း ၃%(p.a) အပြင် လစဉ် အပ်ငွေ နှစ်ဆကို ရရှိနိုင်မယ့်အခွင့်အရေးဖြစ်ပါတယ်။ JZü ဆိုတဲ့အတိုင်း သင့်အတွက် အခွင့်အလမ်းကောင်းတွေ ရှိနေတာကြောင့် JZü ကို သင်က ကျေးဇူးတင်နေမိမှာပါ။
ရိုးမဘဏ် JZü account က တခြား ရိုးမဘဏ် account တွေထက် ဘာတွေ ပိုပြီး ဆွဲဆောင်နိုင်မလဲ။
JZü account က တစ်နှစ် အတိုး ၃%(p.a) နဲ့ နေ့စဉ်အတိုးတွက်ပေးပြီး လစဉ် အတိုးထည့်ပေးသွားမှာပါ။ ဒါ့ပြင် သင့်စာရင်းထဲမှာ အနည်းဆုံး စာရင်းလက်ကျန်ငွေဟာ ကျပ် ၁ သိန်း ရှိမယ်ဆိုရင် အပ်ငွေ ၂ ဆ ရရှိနိုင်မယ့် ဆုရွေးချယ်မှုအစီအစဉ်မှာလည်း လစဉ် ပါဝင်ခွင့်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
စာရင်းဖွင့်ဖို့ အသက်ကန့်သတ်ထားတာ၊ လူဦးရေ ကန့်သတ်ထားတာမျိုး ရှိပါသလား။ စာရင်းကို လူ ဘယ်နှဦးအထိ ဖွင့်လှစ်လို့ရပါသလဲ။ အတိုးနှုန်းက ဘယ်လောက်ပါလဲ။
အသက် ၁၈ နှစ်အထက် ပြည့်တဲ့ ဘယ်သူမဆို JZü account ကို ဖွင့်လို့ရပါတယ်။ လူဦးရေ ကန့်သတ်တာမျိုး မရှိပါဘူး။ အတိုးနှုန်းကတော့ တစ်နှစ်ကို ၃%(p.a) နဲ့ နေ့စဉ်တွက်ချက်ပေးပြီး လစဉ် အတိုး ထည့်သွင်းပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လူတစ်ယောက်ကို account တစ်ခုသာ ဖွင့်လှစ်နိုင်ပါတယ်။
တကယ်လို့ လတစ်လရဲ့ ပထမဆုံးရက်က စနေတနင်္ဂနွေ သို့မဟုတ် ပိတ်ရက် ဖြစ်နေပါက JZü account ထဲကို ငွေဘယ်လို ထည့်သွင်းအပ်နှံရမလဲ။
ဒါဆိုရင်တော့ သင့်အနေနဲ့ အတိုး ၃%(p.a) ရရှိနိုင်ဖို့ လမကုန်ခင်မှာ ငွေထည့်သွင်းအပ်နှံသင့်ပါတယ်။ ငွေထည့်သွင်းအပ်နှံဖို့ မေ့သွားခဲ့ တယ်ဆိုရင်လည်း Wave ကိုယ်စားလှယ်ကတစ်ဆင့် သင့် SMART account ထဲကို ငွေထည့်ပြီး သင့် SMART account ကနေ JZü account ထဲကို Yoma Bank Mobile Banking Application သုံးပြီး ငွေလွှဲထည့်နိုင်ပါတယ်။ စာရင်းဖွင့်လှစ်တဲ့ ပထမဆုံးလအတွက် ၂၆ ရက်နေ့ မတိုင်ခင် ဖွင့်လှစ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လတစ်လရဲ့ ၂၆ ရက်နေ့ သို့မဟုတ် နောက်ပိုင်းမှာ ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါက ယင်းလအတွက် ဆုရွေးချယ်မှုတွင် ပါဝင်ခွင့်ရရှိမှာ မဟုတ်ပါ။
© 2020 Copyright Yoma Bank. No.192, Level 8, Office Tower 2, HAGL Myanmar Center Tower, Kabar Aye Pagoda Road, Bahan Township, Yangon, Myanmar. All rights reserved.